Google anaghị arụ ọrụ: gịnị na-eme? | Nzukọ mkpanaaka
Google anaghị arụ ọrụ: gịnị na-eme?
Edere Ferreno | 25/04/2022 10:00 | Internet
Ngwa dị na gam akporo nwere ike ịnwe nsogbu n'ọtụtụ oge dị iche iche. Nke a bụ ihe nwere ike ime na ngwa ọ bụla dị na ekwentị, yabụ anyị ga-eburu n'uche ya. Ebe ọ bụ na ọ pụkwara ịbụ ikpe ahụ google ngwa anaghị arụ ọrụ na ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Gịnị ka anyị nwere ike ime n’ụdị ọnọdụ ndị a?
Ọ bụrụ na ngwa Google anaghị arụ ọrụ na gam akporo, e nwere ọtụtụ ihe ngwọta anyị nwere ike ịnwale. N'afọ gara aga enwere nnukwu okuku nke ngwa ahụ, otu n'ime oge ole na ole nke a mere, bụ nke mere ka ọtụtụ obi abụọ dị n'etiti ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ. N'ụzọ dị mma, e nwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ime ka anyị nwee ike dozie nsogbu a.
Nke a bụ nsogbu nwere ike ime na ngwa Android ọ bụlaya mere, ọ dịghị mkpa na-echegbu onwe nke ukwuu. Dịka ọ dị na ngwa ọ bụla ọzọ, enwere azịza dị mfe mgbe niile nke anyị nwere ike ịnwale na ekwentị, yabụ ka anyị nweta ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma ọzọ. Ọ bụ ezie na enwere ikpe na ọ gaghị adabere na anyị, ebe ọ bụ na mmalite nke nsogbu ahụ nwere ike ịbụ n'akụkụ Google, dịka ọmụmaatụ. Ma n'ọnọdụ ahụ, anyị ga-ama ihe anyị ga-eme.
Otu esi eji Google chrome remotely
1 Mmalite nke mmejọ a
2 Ngwa ahụ adaala?
3 Njikọ Internetntanetị
4 Ihe nkwalite
5 Kachapụ oghere
Mmalite nke mmejọ a
Ihe kpatara na ngwa Google anaghị arụ ọrụ na gam akporo nwere ike inwe ọtụtụ mmalite dị iche iche. N'ihi na ọ nwere ike ịbụ a okuku nke sava nke ngwa nke ya, yabụ ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ maka onye ọ bụla. N'okwu ndị a ọ nweghị ihe anyị nwere ike ime, mana anyị ga-echere Google n'onwe ya iji dozie nsogbu a.
N'aka nke ọzọ, Ọ nwere ike ịbụ nsogbu na ngwa gam akporo., ihe nwere ike ịdị iche iche. Site na nsogbu ndakọrịta, n'ihi ụdị ngwa anyị na-eji na ngwaọrụ anyị, ruo ọdịda nwa oge na ngwa ma ọ bụ na ekwentị n'onwe ya. Nakwa nsogbu na cache chịkọbara na ekwentị, nke anyị maralarị nwere ike ibute ọdịda na ọrụ ya na gam akporo.
Mgbe ahụ, anyị na-ahapụ gị usoro ngwọta nke anyị nwere ike itinye na nke a. Ekele dịrị ha, anyị ga-enwe ike ime ka ngwa Google na-arụ ọrụ nke ọma ọzọ, ma ọ bụ opekata mpe nwee ike ịchọpụta ebe njehie ngwa ahụ na-enweta n'oge ahụ.
Ngwa ahụ adaala?
Ihe mbụ anyị ga- lelee ụdị ikpe a bụ ma ọ bụrụ na ngwa ahụ adaala. Ihe kpatara ngwa Google anaghị arụ ọrụ na gam akporo nwere ike ịbụ na sava ya adaala. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe mere na ọ naghị arụ ọrụ, anyị amaraworị na naanị ihe anyị nwere ike ime bụ ichere ka Google dozie ọnọdụ a, ihe nwere ike were awa ole na ole. Ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị ihe na-adabere na anyị.
Anyị nwere ike iji Downdetector mara ma ngwa Google adaala. Ibe weebụ a na-enye anyị ozi gbasara nsogbu bilitere na ngwa na ibe weebụ. Yabụ na anyị nwere ike ịhụ ma enwere akụkọ gbasara nsogbu na ngwa Google n'ime awa ole na ole gara aga. E gosipụtara anyị ọnụ ọgụgụ nke akụkọ dị, na mgbakwunye na map nke oge, ebe anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụ nsogbu zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ mpaghara. Nke a na-enyere anyị aka ikpebi ma ngwa ahụ adaala, ma ọ bụ gosi, ọ bụrụ na anyị ahụ na ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ na ekwentị.
Ọ bụrụ na Downdetector, o doro anya na ngwa Google na-ata ahụhụ n'oge ahụ, anyị amatalarị ihe kpatara na ọ naghị arụ ọrụ na gam akporo. Ugbu a, anyị ga-echere ka a dozie nke a, ihe ga-adabere na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya. Ihe kacha nkịtị bụ na mgbe awa ole na ole ihe niile na-arụ ọrụ ọzọ na ngwa.
Egwuregwu Google zoro ezo kacha ịtụnanya
Nyocha nke abụọ iji mee n'ọnọdụ ndị a bụ ọnọdụ nke njikọ ịntanetị. Ngwa Google dị na gam akporo dabere na njikọ ịntanetị ga-arụ ọrụ, yabụ ọ bụrụ na anyị na-enwe nsogbu na njikọ ahụ, ngwa ahụ ga-enwekwa nsogbu ịrụ ọrụ, ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ ma ọlị. Ya mere ọ dị mma ịmara ma nke a bụ ihe kpatara nsogbu a ugbu a na ngwa.
Enwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọpụta ma njikọ ịntanetị ọ bụ ya. Ya mere, ọ dị mma ka anyị na-eme ha niile, n'ihi na ha na-enyere anyị aka wepụ nke a dị ka ihe na-akpata nsogbu na-emetụta anyị ugbu a. Ndị a bụ ego nlele:
Gbanwee njikọ: Ọ bụrụ na ị na-eji data mkpanaka, gbanwee gaa na WiFi ma ọ bụ ọzọ. Nsogbu nwere ike ịbụ njikọ ị na-eji n'oge ahụ, mana ọ bụrụ na anyị agbanwee netwọk ma ọ bụ ụdị njikọ anyị ga-ahụ na ngwa na-arụ ọrụ nke ọma ọzọ. Ya mere, ọ bara uru ime nke a.
Ngwa ndị ọzọ: Ihe ọzọ anyị nwere ike ime bụ imepe ngwa ndị ọzọ chọrọ njikọ ịntanetị iji rụọ ọrụ, ka anyị hụ ma anyị nwere ike iji ha na ekwentị. Ọ bụrụ na anyị emepee ngwa dị ka Instagram ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ka njikọ Ịntanetị abụghị ihe kpatara nsogbu a.
Nnwale ọsọ ọsọ: Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ọsọ njikọ anyị, n'ihi na ọ nwere ike ịdị ngwa ngwa, gbalịa mee ule ọsọ na ekwentị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ n'oge ahụ ka njikọ ahụ si dị ngwa ngwa ma ọ bụ dị nwayọọ ma nwee ike ịhụ ma ọ bụ ihe kpatara ngwa Google anaghị arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji WiFi jikọọ n'oge ahụ wee hụ na ị nwere nsogbu njikọ, ịmalitegharịa rawụta gị kacha mma. Gbanyụọ rawụta a, ka ọ dị ka nke ahụ maka ihe dịka 30 sekọnd, wee gbanye ya ọzọ. A na-edozi ọtụtụ nsogbu njikọ mgbe njikọ ahụ maliteghachiri, yabụ anyị nwere ike iji ngwa ahụ ọzọ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
O nwere ike ịbụ ihe kpatara na ngwa Google anaghị arụ ọrụ na gam akporo bụrụ okwu ndakọrịta. Ọ bụrụ na anyị na-eji ngwa ochie nke ngwa, n'ihi na anyị emelitebeghị ogologo oge, nsogbu nwere ike ibilite na ndakọrịta nke ngwa ahụ na ekwentị. Ya mere, anyị nwere ike ịgbalị imelite ngwa ahụ, lelee ma enwere mmelite dị n'oge ahụ maka ya. Nke a bụ ihe anyị na-eme site na Play Store na anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na e nwere mmelite na anyị nwere ike iwunye na android. Mgbe wụnye ya, ọ nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma.
Nsogbu ndị a nwere ike ibilite mgbe imelitere ngwa ahụ. Nke a bụ akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ, na ọ bụ ụdị ngwa ọhụrụ nke na-emepụta nsogbu ndị a na gam akporo. Nke a bụ ihe na-eme n'ọnọdụ ụfọdụ, ya mere ọ bara uru ịtụle ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe. Ọ bụrụ otu a, anyị nwere ike ichere ka Google wepụta ụdị ọhụrụ, nke ga-abụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo na-enweta nsogbu a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị nwere ike ịkụ nzọ na ịwụnye ụdị ngwa ochie, n'agbanyeghị na usoro a ga-ewe oge iji wuchaa.
Ebe nchekwa ahụ bụ ebe nchekwa na-agbakọba na ekwentị ma ọ bụ mbadamba dị ka ngwa a na-eji. Ọ bụ ebe nchekwa na-enyere aka ịrụ ọrụ nke ngwa ahụ n'onwe ya, ebe ọ bụ na ka cache na-agbakọta, ngwa ahụ na-emepe ngwa ngwa ma na-enye ọrụ dị nro na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-akwakọba ọtụtụ cache, ọ nwere ihe ize ndụ na ọ ga-emerụ. Ọ bụrụ na nke a emee, ngwa ahụ nwere ike ịmalite ịta ahụhụ ma ọ bụ kwụsị ịrụ ọrụ kpamkpam.
O kwere omume na nke a bụ ikpe ugbu a, nke ahụ nnukwu cache agbakọbaala nke na-eme ka ngwa google ghara ịrụ ọrụ na ekwentị. Ya mere, ngwọta na nke a bụ ikpochapụ kwuru cache, nke mere na ngwa ga-arụ ọrụ nke ọma ọzọ. Usoro ndị anyị ga-eso na nke a bụ:
Mepee ntọala ekwentị gam akporo gị ma ọ bụ mbadamba.
Gaa na ngalaba Ngwa.
Chọọ ngwa Google na ndepụta ngwa arụnyere na ngwaọrụ ahụ.
Gaa na ngalaba Nchekwa.
Pịa bọtịnụ Clear cache (ọ nwere ike ịsị cache na data doro anya).
Kwenye na ị chọrọ ime nke a.
Ozugbo kwuru na ehichapụla cache, gbalịa mepee ngwa Google na ekwentị. N'ọtụtụ ọnọdụ, o yikarịrị ka ọ ga-arụkwa ọrụ nke ọma ọzọ. Mgbe ị kpochapụrụ cache nke ngwa ahụ, ị ​​​​ga-achọpụta na oge ole na ole mbụ emeghere ngwa ahụ na-ewe obere oge karịa ka ọ na-eme na mbụ. Nke a bụ n'ihi na ugbu a ọ nweghị cache maka ya. Ka cache nke ngwa ahụ na-agbakọba na ekwentị (ya bụ, ka anyị na-eji ngwa ahụ eme ihe), ọ ga-agbakọbawanye ma meghee ngwa ngwa na ngwaọrụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Google anaghị arụ ọrụ: gịnị na-eme?
Egwuregwu egwuregwu kacha mma maka PC
Evolushọn Eevee niile na Pokémon Go